द्वारा पोस्ट गरिएको Tranquillus | जनवरी 18, 2020 | कार्यालय
त्यहाँ धेरै तरिका छन् एक टोलीको रूपमा टाढा टाढा कार्य गर्नुहोस्। सब भन्दा क्लासिक विधि कुराकानी। जहाँसम्म, प्रभावकारी रूपमा काम गर्न, कर्मचारीहरूलाई तिनीहरूका सहकर्मीहरूले के गरिरहेका छन् ठ्याक्कै जान्नु आवश्यक छ। स्क्रिन सेयरि,, जस्तै टीमभ्युभरले प्रस्ताव गरेको त्यसपछि उपयोगी हुन सक्छ।
TeamViewer के हो?
TeamViewer सफ्टवेयर हो जुन तपाईंलाई टाढाबाट लग ईन गर्न अनुमति दिन्छ। अर्को शब्दहरूमा, यसले तपाइँलाई टाढा टाढाको कम्प्युटर पहुँच र नियन्त्रण गर्न अनुमति दिन्छ। सफ्टवेयरले रिमोट कम्प्युटरमा अनुप्रयोगहरू र फाइलहरूमा पहुँच प्रदान गर्दछ। यद्यपि सम्भावित हेरफेरहरू होस्ट कम्प्युटरले अधिकार दिएको हो। यो सफ्टवेयर दुबै व्यवसाय वा निजी कारणले प्रयोग गर्न सकिन्छ। विन्डोज, म्याक र लिनक्स मेशिनका लागि बिभिन्न संगत संस्करणहरू छन्। मोबाइल संस्करणहरू पनि अवस्थित छन् र वेब मार्फत तपाईंको TeamViewer खाता पहुँच गर्न सम्भव छ। यो बजारमा पनि एक सुरक्षित हो भनेर चिनिन्छ। वास्तवमा, यसले फायरवाल वा कुनै अन्य सुरक्षा सफ्टवेयर निष्क्रिय नगरी राम्रोसँग काम गर्दछ। डाटा ट्रान्सफर ईन्क्रिप्टेड छ कि कुनै दुर्भावनापूर्ण व्यक्तिले तिनीहरूलाई चोरी गर्न सक्दैन। त्यहाँ सफ्टवेयरको दुईवटा संस्करणहरू छन् जुन विभिन्न लक्ष्यहरूको लागि डिजाइन गरिएको हो। उपभोक्ता संस्करण पूर्ण रूपमा नि: शुल्क छ र कुनै पनि अपरेटिंग प्रणालीमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। व्यापार संस्करण चार्जयोग्य छ र यसको मूल्य प्लेटफर्ममा निर्भर गर्दछ। उदाहरण को लागी, विन्डोज को उपयोग को मामला को लागी, मूल्य 479 यूरो बाट शुरू हुन्छ। यसका अतिरिक्त दूर सहायता सक्षम गर्नुहोस्, यसले आफ्ना प्रयोगकर्ताहरूलाई अन्य धेरै उपकरणहरू प्रदान गर्दछ जुन काममा समय बचत गर्दछ। यो उपकरण उपयोगी छ किनकि यसले तपाईंलाई कम्प्युटरमा कार्य गर्न अनुमति दिन्छ शारीरिक रूपमा बिना नै। सफ्टवेयर तपाइँको एक कर्मचारीलाई सीधा आफ्नो पीसीमा समस्या समाधान गर्न मद्दतको लागि पनि उपयोगी छ।
रिड शब्द युक्तिहरू पहिलो भाग-सुन सुन मेरो जानकारी
TeamViewer कसरी काम गर्दछ?
पोख्नुहोस् TeamViewer प्रयोग गर्नुहोस्, तपाईंले आधिकारिक वेबसाइटबाट सफ्टवेयर डाउनलोड गर्नुपर्नेछ र स्थापना गर्नुपर्नेछ। स्थापना जटिल छैन, किनकि यो कार्यक्रमले संकेत गरेको चरणहरू अनुसरण गर्न पर्याप्त छ। सफ्टवेयरको माध्यमबाट टाढाको कम्प्युटर पहुँच गर्न, यद्यपि लक्षित कम्प्युटरले टीमभ्यूभर स्थापना गरेको हुनुपर्दछ। सफ्टवेयर सुरू हुने बित्तिकै एउटा आईडी र पासवर्ड तोकिन्छ। यो टाढाको ग्राहकलाई कम्प्युटर पहुँच गर्न अनुमति दिन उपयोगी हुनेछ। यद्यपि यो डाटा हरेक पटक सफ्टवेयर खोल्दा परिवर्तन हुन्छ। यस प्रणालीले तपाईंको कम्प्युटरमा पहिल्यै जडित व्यक्तिहरूलाई तपाइँको अनुमति बिना पुन: पहुँच गर्नबाट रोक्दछ। टीमभ्यूयरसँग सेवा शिविर पनि भनिन्छ। यो व्यावहारिक उपकरण हो जुन आईटी प्राविधिकहरूलाई रिमोट टेक्निकल समर्थन प्रदान गर्दछ। सेवा शिविरले तपाईंलाई अन्य धेरै कार्यहरू गर्न पनि अनुमति दिन्छ जस्तै कर्मचारी थप्न वा स्वागत बाकसहरू सिर्जना गर्न।
TeamViewer प्रयोग गर्दै
सफ्टवेयर विन्डोमा, त्यहाँ दुई मुख्य विकल्पहरू छन्। पहिलो त्यो हो जुन टाढाको पहुँचलाई अनुमति दिन्छ। दोस्रोले बैठक व्यवस्थापनको लागि अनुमति दिन्छ। दूर पहुँचको मामलामा तपाईसँग दुई विकल्पहरू छन्। तपाईं पहिले गर्न सक्नुहुन्छ दूर व्यक्तिको कम्प्युटरमा पहुँच गर्नुहोस् उसको आईडी र त्यसपछि उसको पासवर्ड संकेत गरेर। रिमोट एक्सेसलाई आधिकारिक बनाउन, तपाईले आफ्नो पत्यारपत्रहरू आफ्नो कम्प्युटरमा पहुँच गर्न चाहेको व्यक्तिको साथ साझेदारी गर्नुपर्नेछ। यो नोट गर्नुपर्दछ कि यो संचार मात्र दुई कम्प्युटरहरू बीच हुन सक्छ। TeamViewer को अन्य सुविधा हो बैठक योजना। यो एक उपयोगी उपकरण हो जुन तपाईंलाई तपाईंको सहयोगीहरूसँग बैठकहरू गर्न अनुमति दिँदछ। तिनीहरू वास्तविक समयमा देख्न सक्नेछन् कि बैठक होस्टिंग कम्प्युटरको डेस्कटपमा प्रदर्शित हुन्छ। बैठक सिर्जना गर्न, केवल "बैठक" ट्याबमा जानुहोस्। त्यहाँबाट, तपाईं बैठकको बारेमा जानकारी सहित फाराम भर्न सक्नुहुनेछ (बैठक आईडी, पासवर्ड, सुरू समय, आदि)। यी विवरणहरू प्रभावितहरूलाई पठाइनु पर्दछ इमेल वा फोनबाट। तपाईं त्यसपछि "मेरो बैठकहरू" मा गएर सत्र सुरू गर्न सक्नुहुन्छ। तिनीहरूलाई पठाइएको लिंकमा क्लिक गरेर, आमन्त्रितहरूले बैठकमा पहुँच गर्न सक्नेछन्।
TeamViewer को पक्ष र विपक्ष
TeamVieawer संग लाभ यो अनुमति दिन्छ टाढाको काम चाँडै र सजीलो ल्यान्डलाइनमा। तपाईको कार्यालयमा काम अघि बढाउन तपाईलाई शारीरिक रूपमा उपस्थित हुनु आवश्यक पर्दैन, जुन खास गरी हड्तालको बेलामा धेरै उपयोगी हुन्छ। TeamViewer को साथ तपाईले आफ्नो कामको कम्प्युटर खोल्नु पर्छ कुनै पनि कम्प्युटर वा स्मार्टफोनबाट पहुँच पाउनको लागि र सुरक्षित तरिकाले। कुनै मानिस कुनै पनि प्रकारको स्थायी बिना नै आफ्नो काममा पहुँच गर्न चाहने मानिस। सामग्री यसको कदर गर्दछ। यद्यपि सफ्टवेयरले प्रस्ताव गरेको सुरक्षा स्तरको साथ पनि यसको प्रयोगले केहि सावधानी अपनाउँदछ। सबै भन्दा पहिले तपाईको कम्प्युटरमा कसैलाई पनि पहुँच दिन सम्मान गर्नुपर्दैन। छोड्दै, उदाहरणका लागि, सत्र स्थायी रूपमा अफिसमा खुला पहुँचको साथ खोलिन्छ।
हडतालको क्रममा TeamViewer को साथ टाढाबाट कार्य गर्नुहोस् अप्रिल th, २०२०Tranquillus
अघिल्लोस्मार्टन्सकिल्ड: अनलाइन प्रशिक्षण साइट सबै आवश्यकताहरू पूरा गर्दै
निम्नटीमहरूमा काम गर्नुहोस् र टाढा टाढा स्ल्याकसँग। वास्तविक समयमा संचार गर्नुहोस्